SONATA-CANTATA: April 2009
“နင်း၊ ကြွ၊ လျှောက်”
“ရပ်၊ ကြည့်၊ သွား”
“ကောင်း၊ သင့်၊ ညံ့”တွေ
“နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း” ကို
“မောင်၊ ကို၊ ဦး” ကို
“ဖြစ်၊ တည်၊ ပျက်” ရဲ့
အမှန်အကန် ရိုက်ချက်။ ။
"နှစ်သစ်မှာ စာတွေပိုရေးနိုင်ပါစေ" လို့ ဆုတောင်းပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် မသီတာ ကြိုးစားရေးကြည့်ထားပါတယ်။ ကိုဧရာက ပုံလေးဆွဲပေးပါတယ်။
လိပ်စာ မြေပုံ အညွှန်း - http://smcmeditation.org/SMC_map.htm
အစီအစဉ် - နံနက် ၉း၃၀ နာရီမှာ အခန်းအနား စတင်ပါမည်။ မြတ်စွာဘုရားနှင့် သံဃာတော်များအား သြကာသကန်တော့ချိုးဖြင့် ညီညာဖြဖြ ရှိခိုးကြပြီး ဆရာတော် ထံမှ ငါးပါးသီလခံယူကြပါမည်။ ဆရာတော်များ ချီးမြှင့်သော ပရိတ်တရားတော်များကို ရိုသေစွာ နာယူကြပြီး၊ ဆရာတော်ထံမှ ဆုံးမသြ၀ါဒ ခံယူကြပါမည်။ နှစ်သစ်ဦးအခါသမယတွင် သတ္တ၀ါအပေါင်းအား ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေကြောင်း မေတ္တာပို့သပြီး၊ မိမိတို့ပြုပြုသမျှ ကုသိုလ် အ၀၀အတွက် ဆုတောင်း အမျှပေးဝေကြပါမည်။
စတုဒီသာ - http://smcmeditation.org/2009_BNY2.jpg နံနက် ၁၁နာရီမှ စတင်ပါမည်။
Labels: ဧရာသီတာ, ဝေမျှခြင်း
ဓမ္မဥယျာဉ် ကျောင်းတိုက် (Sembawang, Singapore) မှ ကျင်းပသော သင်္ကြန်ပုံအချို့
ယဉ်ကျေး လိမ္မာ မင်္ဂလာ ကဗျာ
ဘီလူး ပန်းစိုက် အက
Mixed bean thread noodle and cooked shrimp in lettuce cups with chilli,garlic lime dressing."
မသီတာရဲ့ သူငယ်ချင်း "သီတာ" ချက်ထားတာလေး အားပေးကြပါဦး
Hello my dear Family and Friends,( all over the world)
I wish you all have wonderful, prosperous Burmese New Year.
As I have chance of contesting for the Macy's Culinary Challenge, I tried my best to present myself as food demonstrator.
There must be some weakness and strength.
The contesting period will end at April 10th. It isagreat deal to have your support to get highest rating. If I gotalot of5star rating I will earnachance to win.
The clock is ticking and click the attached file and rate and vote for my food presentation uploaded at Macy website.
It will count every single viewer and rating.
Please forward this mail anybody that related to our community and every vote and comment will count.
I appreciate every support that you vote for me and hope that someday I will be the proud culinary host of my country as well as Asia.
Every single vote and rating counts and please support for my chance of fair competition.
I wish you all have Healthy, Happy & Prosperous New Year!
View my video by clicking the following link.
If you have problem to view from the link,
Simply go to http://www.macy.com/
when you see the Macy shopping web, click to for the home on the top left side under macy logo
Then you can click the kitchen word on the left side of menu bar.
After that you can click the name : Tyler Florence under the bold print of Related Contents.( end of the left side menu bar)
Labels: သီတာ, ဝေမျှခြင်း
ဘလော့မိတ်ဆွေ စာဖတ်သူများကို မသီတာ ခွင့်တိုင်ချင်ပါတယ်။ ပို့စ်အသစ်မတင်နိုင်သေးတဲ့ အတွက်ပါ။ မေလကုန် ဇွန်လဆန်းလောက် ဘလော့ဆီ အရောက်ပြန်လာမည်။ စိမ်းမသွားကြေး။
အခု သူငယ်ချင်း မီသန့်မ ရေးပေးထားတဲ့ အမှတ်တရ - ပြူး ကို တင်လိုက်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်း တယောက်ကို လသာ၂ မှာ စ,တွေ့တယ်။ RIT မှာ ခင်ပြီး ကျောင်းပြီးတဲ့ အထိ တွဲခဲ့ကြတယ်။
သူက state ကျောင်းကတည်းက ကိုယ်လုံးလှလှ ကျောင်းသူတွေကို အတုလား အစစ်လား ခွဲခြားဖို့ Research လုပ်တာ ၀ါသနာပါတယ်။ သူ့ သီအိုရီက အတုဆိုရင် အပ်နဲ့ ထိရင် မနာဘူး။ အစစ်ဆိုရင် အပ်နဲ့ ထိရင် နာမယ်တဲ့။ သူ့ Research ကို လက်တွေ့ မစမ်းသပ်လိုက်ရပေမဲ့ ကျောင်းကပွဲ Braggarts and Decoits အင်္ဂလိပ်ပြဇတ်မှာ ဓားပြဗိုလ်နေရာက Bo Pyuu International (BPI) အဖြစ် ပီပြင်စွာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့အပြီး မှာတော့… ပြူး… ပြူး… နဲ့ ချစ်သူခင်သူတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်ခဲ့တယ်။
မသီတာအတွက် ကံဆိုးတာပဲလား။ ကျနော့်အတွက် ကံကောင်းတာပဲလား။ တရပ်ကွက်ထဲနေကြတဲ့ မသီတာ၊ ပြူးနဲ့ ကျနော်တို့ စွယ်တော်ရိပ်မွန်လို့ခေါ်တဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးကို အတူတူ ခြေချခွင့်ရခဲ့ကြတယ်။
(ကြုံတုန်းလေး…မသီတာပေါ့ ကျောင်းသွားဖို့ကို မနက် ၇း၃၀နာရီခွဲမှာ သူ့အိမ်မရောက်ရင် မစောင့်ဘူး ထွက်သွားတယ်။)
တနှစ်ပတ်လုံး လုံးလည်ချာလည်နဲ့ ပျော်ခဲ့ကြပြီး စာမေးပွဲချိန် ရောက်လာခဲ့တယ်။
စာမေးပွဲ နောက်ဆုံးနေ့ မြို့ထဲက သီဟရုံမှာ ကုလားကားကြည့်ဖို့ သုံးယောက်သား ချီတက်ကြတယ်။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ လေးကျပ်တန်းမှာ တန်းစီနေကြပြီး ကိုယ်တို့ အနားရောက်ခါမှ လက်မှတ်က ကုန်သွားပါပြီ တဲ့။
ဘာလုပ်ကြမလဲ ပြန်မလား။ နောက်တပွဲ ဆက်စောင့်မလား။
ဆုံးဖြတ်ချက်က ပြတ်သားတယ် ကြည့်ဖို့လာတာ ကြည့်ပြီးမှကို ပြန်မယ်။
ည ၇း၃၀နာရီ ပွဲကို ကာတွန်းဖတ်ရင် လက်မှတ် ဆက်တန်းစီကြတာပေါ့။
ညပွဲမှာ လက်မှတ်ရလို့ ကြည့်နေတုန်း…
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ အဖေတွေ ဟိုသူ့အိမ် ဒီသူ့အိမ် ခြေချင်းလိမ်နေကြပြီ...
အချိန်တန် ပြန်မရောက် ကျောင်းကလည်း ပထမနှစ် အပြီးလေး…
အဲ့ဒီလို လုပ်ချင်ရာကို ဇွတ်လုပ်ခဲ့ကြတာ…
(အိမ်ကဆူမှာကိုလဲ ကာကွယ်ဘို့ စကားလုံးလေးတွေလည်း စဉ်ပြီးသား)
(Braggarts and Decoits က အဲ့ဒီအချိန်က န၀မတန်း အင်္ဂလိပ်ပြဌာန်းစာအုပ်မှာ ပါတဲ့ ဖတ်စာ တပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။)
Labels: မီသန့်ရေး အမှတ်တရ
ချယ်ရီ Japan, ကျူးလစ် Western, အော့ခစ် Singapore နဲ့ ပိတောက် မြန်မာ တို့ကို ခံစားသည်။
(ကျူးလစ်ပုံမှာ ကရေတွန်၏ ကျူးလစ် အစစ်တွေမှ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ပုံများကို google search မှရယူပါသည်။)